EL- Clasico iyo 5 Dhacdo oo ay Macquul tahay inaadan ka warqabin, caawana la filan karo! – Gooldhalin
EL- Clasico iyo 5 Dhacdo oo ay Macquul tahay inaadan ka warqabin, caawana la filan karo!
Muuse Abdi May 6, 2018	No Comments
Kulanka ugu Weyn waqtigan Caalamka uguna xiisaha badan Saacado yar ayaa kaa xiga inaad daawato
Safafka Billowga iyo ka Fakarkooda
Waxaa taagan in Zinedine Zidane uu cidduu doono u xilsaaran karo in ay uga hortagto kooxda Barcelona Axadda maanta ah. Waxaad aragtay isbeddellada Safafka ee uu sameynayay tan iyo soo gaaristiisa Champions League final, intaas keddib Diario AS waxay diidday wararka xanta ah ee sheegaya in Zidane uu ciyaarsiin karo Safkii uu uga hortegay kooxda Bayern lugtii labaad. Macalinka ayaase xaqiijiyay in aysan ciyaartoydiisu 100% diyaar aheyn kulanka Barcelona. Waxaase jira kuwo badan oo ciyaari kara.
Kualnkii ugu dambeeyay ee adkaa
Real Madrid ciyaarteeda La Liga ee 2017/18 waxay kala kulantay weji gabax, waayo waxay fadhiyaan kaalinta 3aad Sanadkan, Afar dhibcood ayeyna ka hooseeyaan kooxda la deriska ah ee ku ciyaarta Wanda Metropolitano. Labaduba Madrid derbies iyo lugtii hore ee Clasico waa ay ciyaartay Real Madrid Kaliya 2 dhibacood ayeyna ka heshay 3daas ciyaarood. Kulanka Camp Nou Clasico wuxuu noqon doonaa Los Blancos mid ah ku rajo gelin karto ciyaaraheeda xagaaga dambe La Liga mar hore ayeyba u dabbaal degtay Sanadkan kooxda Barcelona.
Aar Gudasho waa la filan karaa
Garoonka Santiago Bernabeu ciyaartii ka dhacday ee Clasico waxay aheyd December 2017 waxay aheyd dhabar jab weyn oo ku dhacay Madridistas, xilli Barcelona ay khasaare 3-0 ah ku diray Real Madrid. Waxay markan kooxda Caasimaddu u dagaallameysaa markii Seddaxaad in ay Champions League qaaddo. Los Blancos ayaase garaneysa sida loogu badiyo caasimadda Catalan, waayo 4 guulood ayey kuso Gaartay 12-kii kulan ee lasoo dhaafay Barca gurigeedana lagu dheelay. Kooxda martida loo yahay ayaa sidoo kale ku badisay Gurigeeda 4 kulan ciyaarahaas, Axadda ayaana kooxda Madrid ka dhigi karta mid hoggaanka heysa dhanka guulaha Camp Nou 13-kii kulan ee u dambeysay. Aar gudashada ayaa muhiim noqon doonta.
Waa Fursaddii u dambeysay ee Cristiano
Real Madrid wiilkeeda ayaa weli heli kara Kabaha Golden Shoe iyo Pichichi waase hadduu wacdare ku dhigo kooxda Barca 2018. Wiilka Portuguese ah ayaa dhaliyay 20 gool oo horyaalka ah La Liga, wadarta ciyaaraha gudahana 24, kaliya wuxuu ka hooseeyaa Lionel Messi oo dhaliyay 32. Cristiano Ronaldo ayaa ku wanaagsan habka Saamiga dhaliska ee Boqolleyda, marka la fiiriyo in uu Kulankiiba gool dhaliyo tirada ay ka yihiin La Liga. Barcelona, Sevilla, Celta iyo Villarreal ayaa ahaa kuwa ugu dhibka badan ee uu wajaho, balse caawa oo kale waa habeen u wanaagsan Cristiano sida la warinayo.
Xushmaddii kooxda qaadda koobabka Gudaha
Waa wax kale oo ka hadal mudan in El Clasico lagu yaqiin Xushmad loo sameeyo kooxda qaadda koobabka Gudaha taas waxaa jebineysa Real Madrid maaddaama ay qaadday Koobka kooxaha Dunida. Barcelona ayaana markaas diidday in ay u istaagto Los Blancos oo ay Xushmad siiyaan December, Dhaqankiina waa uu wiiqmay, Zinedine Zidane ayaa dhankiisa sheegay in ay la mid tahay uun Camp Nou. Sidii markii dhoweyd ay Barca sameysay, taasoo la macno ah in aan Saf sharafeed loo geli doonin Barcelona Caawa.
Previous Previous post: Wararkii ugu Waaweynaa Wargeysyada Yurub ee maanta, Martial iyo Willian oo la isku beddelanayo!
Next Next post: Liverpool iyo Chelsea oo diyaar u ah inay £ 50m ku doonayaan xiddiga Wilfried Zaha.;